स्वस्थ रहने पानी कती पिउने ? | Nagarik News - Nepal Republic Media
स्वस्थ रहने पानी कती पिउने ?
शरीरका लागि पानीको महत्व कति हुन्छ भन्ने सबैलाई थाहा छ । हाम्रो शरीरको कुल वजनको करिब ७० प्रतिशत पानी हुन्छ । शरीरका सबै अंग र आन्तरिक कार्यप्रणाली ठीक ढंगले काम गर्न पनि पानीको उचित स्तर बनिरहनु आवश्यक हुन्छ तर कुनै रोग, व्यायाम, लु आदिका कारण शरीरमा पानीको कमी हुँदा हामीलाई प्यास लाग्छ ।
(न्युजिल्यान्डको मेसी युनिभर्सिटीमा खेल र व्यायाम विभागका लेक्चरर टबी मुन्डेलको यो आलेख द कनभर्जेसनमा प्रकाशित छ ।)
प्रकाशित: ११ आश्विन २०७३ १०:२८ मंगलबार
स्वस्थ रहने पानी कती पिउने